Myanmar(Birmana): Bodista tafintohina tamina sarina mpilalao sarimihetsika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2009 7:46 GMT
Sary iray manafintohina ahitana mpilalao sarimihetsika iray miaraka amin'ny namany miankanjo rebareba saffron no nisy nametraka tao amina blaogy birmana malaza iray, nampisafoaka ny fiombonamben’ ireo mpitoraka blaogy birmana.
Min Maw Kun & sy andiany iray amin'ireo namany nandritra ny fotoam-panokanana azy ireo
Ilay sary dia ahitana ny mpilalao sarimihetsika Min Maw Kun, ilay mpaka sary Wunna Khwar Nee ary ireo namany nandritra ny fotoam-panokanana azy ireo tao amin'ny monastera birmana iray . Nefa, ny endrika ivelan'ireto “moine vaovao” ireto dia nampipotsaka ny mason’ ny fiombonamben'ny boudista birmana.
Irrawaddy dia nanoratra:
Na dia sola aza ny lohan'izy ireo ary mitafy ankajona relijiozy, ny ankabeazan'ireo zatovolahy dia misy tombokavatsa toy dragona sy maingoka, ary tombokavatsan'ny andro taloha sy ny foko nipoirana.Ny sasany amin'ireo lehilahy ireo dia mitsiky ao amin'ny camera raha ireo hafa kosa indray dia mifamihina manao fihetsika mihantsy.
Ilay sary dia napetraka voalohany indrindra tao amin'ny blaogin'i Niknayman , izay manontany tena ny amin'izay tao an'eritreritr'ilay mpilalao sarimihetsika.
Hajaina ireo ankanjo rebareba Saffron, ary ireo moines ihany no mahazo mitafy azy, izay raisina ho toy ny zanaky ny Andriamanitra Buddha. Ireto eto amin'ity sary ity dia tsy tokony hitafy saffron ka haneho ireny endrika sy ireny tombokavatsa tsy manjary ireny. Ny zavatra toy ireny dia tokony tsy hitranga mihitsy na inona na inona antony.
Avy eo, nadika sy navoaka tany amina blaogy Birmana maro hafa ilay sary. Maro amin'ireo Birmana no nisafoaka tamin'io sary io. Ao anatin'izany i Ashin CandoBhaSaCara, moine iray manan-kaja any Etazonia. Namoaka lahatsoratra izy, mitondra ny lohateny hoe “Fa maninona no dia vingavingain'ny mpilalao sarimihetsika Min Maw Kun toy izao ny Finoantsika?”, mivoaka amina blaogy Birmana maro. Ao amin'ny lahatsoratra, nanazava izy momba ny andraikitr'ireo moine Bodista, ary maneho ireo fanao tsy mendrika nataon'ilay mpilalao sarimihetsika tamin'ny nihoarany ireo fepetra rehetra maha-moine.
Ny mpilalao sarimihetsika dia tokony hanaja ny olona. Tokony hanao ny tsara ka misoroka ny zavatra ratsy. Min Maw Kun sy ireo namany dia nanary ny soatoaviny tamin'ny nanaovany iny tranga mahamenatra iny. Ny rainy, (mpilalao sarimihetsika) Zin Wine dia manana andraikitra koa amin'io, noho ny zavatra ataon'ny ankizy mifamatotra mivantana amin'ny andraikitry ny ray aman-dreny. Ary koa, ilay moine ambony ao amin'ny monastera izay nampiankanjo ireto olona ireto toy izao no tena adala.Mety ho tsy nahafantatra ity hetsika maha-menatra nandritry ny fotoam-panokanana ity ilay moine nitarika ny fotoana. Na izany aza anefa, ny olona salama saina dia tokony hahalala fa tsy azo ekena mihitsy ny zavatra tahaka izao ao amin'ny kolotora Bodista. Mampiseho ny tena toetran'ilay mpilalao sarimihetsika Min Maw Kun fotsiny io, izay manao sary miaina mba hitaizana ny olona.
Nefa, tao amin'ny tranonkala Birmanin'ny Radio Free Asia, ny mpilalao sarimihetsika Min Maw Kun niteny fa tsy misy hevitra ambadika mihitsy io sary io, ary nifona tamin'ny fihetsiny izy.
Tsy manan-kevitra ny handoto ny Bodisma mihintsy aho. Tsy manan-kevitra ny hanala baraka ireo moines aho. Izy ireo no firavaka sarobidy izay tokony hohajaintsika. Marina, manao tombokavatsa amin'ny tenanay izahay, nefa amin'ny fandalovan'ny fahatanorana fotsiny ireny. Lasa moine niaraka tamin-janako aho, ary niaraka nanatrika ny fotoam-panokanana izahay. Ny sary izay nalaina tamin'ny fanadiovana ny monastera dia natao ho fahatsiarovana fotsiny. Efa 2 toana any ho any io sary io. Raha ny firesaky ny olona momba azy io, ny tokony hataoko indrindra dia ny mitandrina ny fihetsika ataoko. Tsy nanana hevitra hafa aho, fa mbola tanaty fahatanorana. Izany no mahatonga ahy maneho fifonana amin'ireo moines rehetra.
Izay rehetra anaty farango sosona etoana dia dikanteny nataon'ny mpanoratra daholo. Ny lahatsoratra niaingana dia amin'ny teny Birmana.